Airport - Rikoooo
Overview rehetra Downloads Fampidinana farany Fampidinana malaza - SCENERY - - Fitantanana ny tany - - Frantsa - fiaramanidina - - fiaramanidina (isan-karazany) - - Fiaramanidina taloha - - Mpiady - - Cessna - - Gliders - - Zlin Aviation - AIRCRAFT - - fiaramanidina (isan-karazany) - - Airbus - - Boeing - - Whole fleet of aircraft - - Old fiaramanidina - - Fighter - - Antonov - - Tupolev - - Socata - - Hawker Beechcraft - - McDonnell Douglas - - Bombardier Aéronautique - - Seaplane - - Lockheed Martin - - Patrouille de France - - De Havilland - - Embraer - - Cessna - - North American Aviation - - Gliders - - Britten-Norman - - ATR - - Grumman - - Pilatus - - Frantsay Vokovoko Mena - - Lockheed - HELICOPTER - - Various angidimby - - Eurocopter - - Bell Aircraft Corporation - - Piasecki PHC - - Sikorsky - - Aerospatiale - SCENERY - - Airport - VARIOUS - - Projects, prototypes - - Fanovana - Tools - Paywares Flight simulator 2004 - AIRCRAFT - - Aircraft (Uncategorized) - - Airbus - - Boeing - - Ny sambo manontolo manontolo an'i Frantsa - - Patrouille de France - - North American Aviation - - De Havilland - - Hawker Beechcraft - - Embraer - - Seaplane - - Old fiaramanidina - - Bombardier Aéronautique - - Cessna - - Rosiana mpiady - - French mpiady - - Various mpiady - - Antonov - - ATR - - Gliders - - Britten-Norman - - Tupolev - - Frantsay Vokovoko Mena - - Lockheed - - Pilatus - - Lockheed Martin - HELICOPTER - - Hélicoptères (divers) - - Eurocopter - - Bell Aircraft Corporation - - Sikorsky - - Aerospatiale - SCENERY - - Various toerana tsara tarehy - VARIOUS - - Fanovana - - Projects, prototypes X-Plane 10 - X-Plane 10 fiaramanidina - - Fighter - - Various fiaramanidina - angidimby - - Various - Various Special Puzzles Free - X-Plane 9 fiaramanidina - - Airbus - - Old fiaramanidina - - Various fiaramanidina - angidimby
Prepar3D FSX - Seranam-piaramanidina
Fampidinana rehetra ho an'ny Prepar3D FSX - Seranam-piaramanidina
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Sulaymaniyah (ORSU) Irak 2021 FSX & P3D
1 956 4.73 (11)
Size 1.64 GB
Nohavaozina taminy 27-03-2021
Ity misy fahitana vaovao an'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Sulaymaniyahen any Iràka, tokony ho fantatrao fa io seranam-piaramanidina io dia tsy nisy akory tao amin'ny FSX / P3D tahiry. Sehatra tena-kanto sy feno sary-tena hita tao amin'ny Freeware by Pro Simulation (MAHER SOURITI).
OFX Calvi St-Catherine Airport LFKC FSX & P3D
12 365 2.77 (35)
Nohavaozina taminy 18-12-2019
Rikoooo EXCLUSIVE: ny tranokala 'payware' dia natolotra maimaim-poana raha anisan'ireo fiaraha-miasa eo amin'ny Rikoooo sy OFX / Flight Studios.
Nataon'i OFX / Flight Studios
9 396 3.63 (8)
Size 377 MB
Nohavaozina taminy 19-03-2019
Ao anatin'ny fiaraha-miombon'antoka Rikoooo-OFX Interactive Simulations, manolotra malalaka ny toerana misy ny seranam-piaramanidina Bourges [LFLD / BOU] hita ao amin'ny departemantan'i Cher (France).
Nosoratan'i OFX Interactive Simulation
Seranam-piaramanidina Quebec Jean Lesage FSX & P3D
9 447 4.25 (4)
Nohavaozina taminy 25-11-2017
Ity lahatsary manaraka ity dia ny fisian'ny sehatra avo lenta indrindra avy amin'ny sehatra iraisam-pirenen'ny International Airport Jean Lesage de Québec (CYQB) FSX.
Nosoratan'i Gilles Boily
6 052 4.50 (2)
Nosoratan'i Shehryar 'Shez' Ansari
Fort Wayne Intl Airport P3D
3 527 4.33 (3)
Davao International Airport FSX & P3D
8 918 4.27 (11)
Size 440 MB
Nohavaozina taminy 07-11-2017
Tena feno tanteraka ny trano 3D, AFCAD, Autogen, sns. 100% mifanaraka amin'ny Prepar3D
Nosoratan'i Emilio Comiling Jr.
Hillsboro Airport KHIO FSX & P3D
7 322 5.00 (1)
Size 988 MB
Nohavaozina taminy 15-04-2019
Indro ny seranam-piaramanidin'i Hillsboro (KHIO) Oregon USA, ity sary ity dia navoaka miaraka amin'ny 2014 Oregon International Show. Ny lanonana dia ahitana karazana endrika samihafa nataon'ilay mpanoratra sy mpanakanto hafa tamin'ity hetsika ity.
Nosoratan'i Rick Keller
6 553 4.14 (7)
Nohavaozina taminy 15-11-2017
Ity dia famerenana amin'ny antsipirihany ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Richmond, USA. Ny seranam-piaramanidina dia varavarana manan-danja ho an'ny renivohitr'i Virginia hatramin'ny 1927.
Nosoratan'i Shehryar Ansari + mpanoratra maromaro
Klagenfurt Airport LOWK Aotrisy FSX & P3D
12 665 3.67 (12)
Ity misy fizahana mahafinaritra sy feno ny seranam-piaramanidina Klagenfurt any Aotrisy nataon'i Manfred Marbler, ny seho v5 dia misy sary-tsary tena izy, takelaka alina, haino aman-jery, tranobe 3D maro, lalana feno antsipirihany sy seranam-piaramanidina. Add-on manana kalitao ambony amin'ny Freeware iray.
Nosoratan'i Manfred Marbler
Ny seranam-piaramanidin'i Bangkok VTBD & VTBS FSX & P3D
23 409 4.00 (10)
Nohavaozina taminy 21-10-2017
Eto dia ny entana izay ahitana sceneries roa, Bangkok Suvarnabhumi International Airport (VTBS) Bible 1.5 sy ny malaza Don Muang International Airport (VTBD). Samy seranam-piaramanidina dia tafiditra amin'ny sary-tena textures, 3D trano, sns
Nosoratan'i KT-Designs Scenery (VTBD), Ray Smith (VTBS)
Ushuaia Malvinas Argentinas Intl Airport FSX & P3D
Size 216 MB
Nohavaozina taminy 03-06-2018
Photo-tena tsara tarehy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ny Ushuaia any Arzantina, anisan'izany ny 3D trano.
Nosoratan'i SIMARG - Simulacion Argentina
8 294 5.00 (2)
Nohavaozina taminy 20-10-2017
Toerana manodidina avy ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena miorina ao El Calafate ao Arzantina, dia manana fotoana roa, fahavaratra na ririnina (miaraka amin'ny oram-panala) fa ho azo atao ny mifidy mandritra ny fametrahana mandeha ho azy.
Long Beach Airport FSX & P3D
17 980 4.17 (6)
Sehatra mahafinaritra (v5) an'ny seranam-piaramanidina Long Beach (KLGB), io no seranam-piaramanidina manompo ny tanànan'i Long Beach, Kalifornia (Etazonia). Anisan'izany ny tranobe 3D, sary tena sarin'ny tany, ary zavatra maro hafa
59 920 3.69 (26)
Nohavaozina taminy 08-11-2017
Jereo ny seranam-piaramanidina Gran Canaria International izay mbola tsy nisy taloha akory FSX. Ny seranam-piaramanidina sy ny manodidina dia marina tsara ary mifototra amin'ny sary amin'ny zanabolana.
Nosoratan'i Sim Giants
Fortaleza City + Airport Photoreal FSX & P3D
31 443 2.80 (5)
Saripika ho an'ny sary FSX ary Prepar3D v1 sy 2, anisan'izany ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Pinto Martins (SBFZ / FOR) miaraka amin'ny terminal sy ny tanànan'i Fortaleza any Brezila, anisan'izany ny lalana amoron-dranomasina, autogen afovoan-tanàna sy manodidina, ny làlam-pifamoivoizana, ny fifamoivoizana, ny trano 3D, ny ala autogen.
Nosoratan'i guyfs9, Bruno Israel, Rui Mesquita
Old Rhinebeck Aerodrome FSX & P3D
9 653 4.00 (2)
Size 349 MB
Nohavaozina taminy 30-05-2015
Ny tanjona napetraka dia ahitàna ireo fotodrafitrasa fotorea, ny mpangalatra rehetra, ny tranobe rehetra, ny zava-baventy rehetra tahaka ny fiaramanidina efa tranainy ao anatin'io tranokala io, ary ny 1929 New Standard D-25 New York dia notendren'ny AI. Ny haavon'ny kalitain'ity toerana ity dia mitovy amin'ny vokatra Orbx!
Nosoratan'i Golden Age Simulasi & Ed Wells
Rochefort - Saint Agnant LFDN FSX & P3D
11 884 5.00 (1)
Toerana manodidina ny seranam-piaramanidina Rochefort-Saint Agnant (France) LFDN dikan 2.0, araka ny BA 721. Ny toerana manodidina noforonina tao GMAX, trano ny, Aero fikambanana no mifanitsy, statics fiaramanidina, zavatra, rehetra mitaky ny hanao sidina matsiro.
Nosoratan'i Alexandre REMY FAF010 & FAFZONE
La Rochelle - Île de Ré LFBH FSX & FSX Steam
32 418 5.00 (1)
Pretty tsara toerana tsara tarehy photoreal pirinty 3.0 ny seranam-piaramanidina ao La Rochelle any Frantsa (LFBH) sy ny manodidina. Ampidiro ny tetezana ny Ile de Ré, miaraka amin'ny halavan'ny 2926.5 metatra.
Nosoratan'i Alexandre REMY FAF010
Fampidinana: Pejy 1 amin'ny 2 Valiny 1 - 19 amin'ny 25